Gear Engineering INTECH nwere ahụmịhe dị ukwuu na injinia na imepụta ihe, nke mere ndị ahịa ji abịakwute anyị mgbe ha na-achọ ihe ngwọta pụrụ iche maka mkpa nnyefe ha. Site n'ike mmụọ nsọ rue na mmata, anyị ga - arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị otu gị ịnye nkwado injinia ọkachamara ...
Nlekọta maka ụlọ ọrụ Gearmotors na ndị na-ebubata ya
Rature Ọnọdụ okpomọkụ maka iji: A ga-eji igwe eji arụ ọrụ na okpomọkụ nke -10 ~ 60 ℃. Ọnụ ọgụgụ ndị e depụtara na nkọwapụta katalọgụ na-adabere n'iji ya eme ihe na ọnụ ụlọ nkịtị dịka 20 ~ 25 ℃. A-range Okpomọkụ dịgasị iche iche maka nchekwa: A ghaghị ịchekwa moto ndị na-arụ ọrụ na okpomọkụ nke -15 ~ 65 ℃ .In ...
Enwere ọtụtụ njikọta njikọ, nke enwere ike kee n'ime: (1) Ofu njikọ: A na-ejikarị ya eme ihe ebe achọrọ ka etinyere abụọ ahụ tinye isi na enweghị nchụpụ ikwu n'oge ọrụ. Ihe owuwu a dikwa nfe, nfe imeputa, na ntan ...
Gearbox na ọtụtụ-eji, dị ka na ifufe tobaim. Gearbox bụ ihe dị mkpa n'ibu akụrụngwa ọtụtụ-eji na ikuku igwe. Ọrụ ya bụ ibunye ike ikuku na-ebugharị n'okpuru ọrụ nke ike ikuku na generator ma mee ka ọ nweta ọsọ na-agba ọsọ. Ugboro ...